Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Jamaica » Jamaica na-ewere ọla edo na ọla ọcha na onyinye Travvy
Awards • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Caribbean • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ gbasara Jamaica • News • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
(lr) Delano Seiveright, Senior Advisor and Strategist, Ministry of Tourism and Jamaica Tourist Board Executives - Christopher Wright, Business Development Manager; Francine Carter Henry, Onye njikwa, ndị ọrụ njem na ụgbọ elu; na Phillip Rose, Onye isi mpaghara, Northeast USA, were obere oge foto iji gosipụta onyinye ọla edo na ọla ọcha Jamaica nwetara na 2021 Travvy Awards emere na Miami Beach Convention Center na Tọzdee, Nọvemba 11.
Ihe na-erughị otu ọnwa ka ha nwetasịrị onyinye nrite nke World Travel Awards Caribbean & North America 2021 Ndị mmeri na Dubai, United Arab Emirates, Jamaica meriri ọzọ na Tọzdee, Nọvemba 11, na 2021 Travvy Awards na Miami, Florida.
Mba ahụ weghaara ọla edo maka ebe kacha mma Caribbean, ebe ebe nri nri kacha mma, bọọdụ njem nlegharị anya kacha mma, yana mmemme Academy Agent Agent kacha mma.
Jamaica nwetakwara ihe nrite ọla ọcha maka ebe agbamakwụkwọ Caribbean kacha mma yana ebe ezumike ezumike Caribbean kacha mma.
Emere Travvy Awards kwa afọ na Miami Beach Convention Center.
Jamaica meriri ọla edo n'ụdị nke ebe kacha mma nke Caribbean, ebe ebe nri nri kacha mma, bọọdụ njem nlegharị anya kacha mma, yana mmemme ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ kacha mma. Jamaica nwetakwara ihe nrite ọla ọcha maka ebe agbamakwụkwọ Caribbean kacha mma yana ebe ezumike ezumike Caribbean kacha mma.
Mịnịsta na-ahụ maka njem nlegharị anya Hon. Edmund Bartlett gosipụtara obi ekele ya maka nnabata Travvy nwetara ebe ọ na-aga, na-ekerịta na "ọ bụ nnukwu ihe ùgwù ịbụ ndị otu a ama ama nke ndị ọkachamara ụlọ ọrụ ghọtara."
"Jamaica na-eji ezi ekele na ịdị umeala n'obi na-anabata ihe nrite ndị a. M ga-ekele ndị otu na-arụsi ọrụ ike n'ime Ozi nke Njegharị, Jamaica Tourist Board, òtù ọha anyị ndị ọzọ, yana ndị ọrụ anyị na-arụsi ọrụ ike n'ịkwalite ika Jamaica ma na-aga n'ihu na-emezi ihe nlegharị anya anyị. Ọ bụ mmetụta magburu onwe ya ịmara n'oge ọrịa na-efe efe, nke emetụtala ụlọ ọrụ njem anyị nke ukwuu, "ka ọ gbakwụnyere.
Na emume onyinye a, Onye isi oche nke Jamaica Tourist Board (JTB), John Lynch; Delano Seiveright, Senior Advisor and Strategist, Ministry of Tourism, and executives from the JTB - Christopher Wright, Business Development Manager; Francine Carter Henry, Onye njikwa, ndị ọrụ njem na ụgbọ elu; na Phillip Rose, Onye isi mpaghara, Northeast USA, nọchitere anya Jamaica.
N'afọ gara aga, njem gị n'ụlọnga agụ nke [email protected] magazin na TravelPulse.com tụbara ihe karịrị 130,000 votes n'ime ụdị 140 iji chọpụta ndị meriri n'afọ a.
A na-eme mmemme Travvy kwa afọ nke akpọrọ "Academy Awards of the Travel Industry" na Miami Beach Convention Center iji sọpụrụ ụlọ ọrụ njem, ngwaahịa njem, ụlọ ọrụ njem, na ebe ndị njem maka ihe ịga nke ọma ha dị ịrịba ama.